दुई छोराछोरी आमा एक्कासी हराएपछी श्रीमान र आफन्त चिन्तित । सक्दो शेयर गरेर खोज्न सहयोग गरौं ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारदुई छोराछोरी आमा एक्कासी हराएपछी श्रीमान र आफन्त चिन्तित । सक्दो शेयर गरेर खोज्न सहयोग गरौं !
November 28, 2020 admin समाचार 2030
उनका १२ बर्षिय छोरी र १० बर्षका छोरा गरि दुई सन्तान छन् । लक्ष्मीका श्रीमान दिपकले छोराछोरोको मुख हेरे भएपनि फर्किन आग्रह गरेका छन् । साथै कसैले देखेमा खबर गरि सहयोग गरिदिन पनि अनुरोध गरेका छन् । दिपककका अनुसार प्रहरीबाट आएको पेन्सन, पसलको नगद सम्पत्ति र गरगहनासहित लक्ष्मी बेपत्ता भएकी हुन् । ‘म गाउँमा काममा व्यस्त थिए । छोराछोरी लक्ष्मीसँगै थिए । लगातार आफन्त र चिनेजानेकोमा खबर गर्यौ तर कतै पत्ता लागेन ।
December 24, 2020 admin समाचार 2203
December 25, 2020 admin समाचार 1117
काठमाडौ । हिजो आज डिर्भोस बाक्लो रुपमा हुन थालेको छ ।श्रीमान श्रीमती छुटिन र जोडिन कुनै समय लाग्दैन । कतिबेला श्रीमानका गल्तीहरुका समाचार आउछन मिडियामा त कतिबेला श्रीमती फरार भएका । कहिले श्रीमानबाट श्रीमती पि,डित
November 19, 2020 admin समाचार 4554
साहित्यकार कृष्ण धरावासी, पूर्वमन्त्री वीरमणी ढकालकी पत्नी लक्ष्मी ढकालको कात्तिक ६ गते काठमाडौंको हेम्स अस्पतालमा निधन भयो । अहिले स्वर्गीय आमाको किरियामा छोरीहरु वसेका छन्, जसको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ । आमाको किरिया गरेर वसेका